Mmiri ọdọ mmiri Guadalcacín meghere ibo ụzọ ya | Njem zuru oke
La Mpaghara ọdọ mmiri nke Jerez district nke Guadalcacin, meghere ọnụ ụzọ ya ụnyaahụ ọzọ, mgbe afọ abụọ nke esemokwu, nke ọ na-emechi, n'ihi usoro iwu metụtara ịmalite ya, ihe ndị agbata obi ya agaghị aghọta, ma ọ bụ ndị Jerez bụ ndị, maka ọtụtụ afọ, abịawo ụlọ ọrụ ndị a ka obi jụrụ ha.
Mmechi nke ọdọ mmiri a emeela, n'ime afọ abụọ gara aga, enweghị nkatọ na esemokwu tụbara megide obodo nke mpaghara ahụ na imegide akwụkwọ akụkọ Jerez. Ikike mmeghe mechara rute, mmezigharị a rịọrọ mechara gafee, ma ugbu a, ihe fọdụrụ bụ ka ndị bi na mpaghara nwee ike ịnụ ụtọ ihe owuwu ndị ha tufuru.
N'ezie, mmezi nke akụrụngwa emeela doro anya. Izugbe nhicha dum recinto, nke ọdọ mmiri abụọ ahụ na ntọala nke ebe ahụ, ma ọrụ ma ụlọ mmanya. Ọzọkwa ha anọwo na natara ụfọdụ mpaghara ahịhịa nke adịkwaghị adị, ma agbaala ogige ahụ ma dozie osisi ọgwụgwọ. Na na-echekwa ndụ nke iwu chọrọ etinyekwa ubube nwere nchedo.
Ya mere, enwere ike ịta ahụhụ site na Ọdọ Mmiri Ọchịchị nke Guadalcacín. Agbanyeghị, anyị ekwenyeghị na ọ ga-ewe afọ abụọ iji mee mgbanwe ndị emere ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ọdọ mmiri Guadalcacín meghere ibo ụzọ ya ọzọ
Ọta, ọkọlọtọ na kangaroos